Madaxweynaha Soomaaliya oo Gaarey Magaalada Afgooye – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo Gaarey Magaalada Afgooye
May 8, 2017 8:46 b 1
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno kairsan labada Golle ee dowlada Soomaalia ayaa goordhaw safar dhinaca dhulka ah ku gaaray Degmada Afgooye , waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay masuuliyiin katirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweynaha iyo xubnaha la socda ay hada ku sugan yihiin qeybo kamid ah Degmada Afgooye, waxa ayna halkaasi kulamo kula leeyihiin masuuliyiin iyo saraakiil katirsan ciidanka dowlada.
Amaanka wadada isku xirta Magaalada Muqdidho iyo afgooye ayaa saakay si weyn loo adkeeyay, waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka u kala gooshi jiray Magaalada Muqdfisho iyo Degmada Afgooye.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in booqashadiisa Degmada Afhgooye ay salka ku heyso qiimeynta xaaladaha ka jira Degmada Afgooye iyo deegaanada hoostaga, waxa uu sidoo kale Madaxweynaha dhiiro galin u sameenayaa ciidamada amaanka ee jooga gobolka Sh.Hoose.
Wasiirka Amniga Puntland oo Awaamiir Cusub Soo Saaray (dhegayso)
maxamad.maxamad. aadan 1 year
waa wax aad iyo aad u wanagsan waan tilaabo mudan in laxuso oo soomaalidu is ku istaagto islamarkaanah aragtah in soomaliya la soo nooleeshiinkaro allah ha noo garbgalo madaxda qaaliga ah